How to Become World No.1 Hacker e-Book - Khit Minnyo
e-books How to Become World No.1 Hacker e-Book
How to Become World No.1 Hacker e-Book
by KhitMinnyo on October 07, 2017 in e-books
ဒီနေ့ မျှဝေပေးချင်တဲ့ စာအုပ်ကလေးကလေးကတော့ အားလုံး စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ နံပါတ်တစ် hacker တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်လာနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဒီစာအုပ်ကလေးထဲမှာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် မြင်တွေ့ရစေမှာပါ။
ကန့်သတ်ချက်မထားဘဲ ပြန်လည် ဝေမျှပေးတဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်တာမို့ လေ့လာသူတွေအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ စာအုပ်လေးကို အောက်မှာ ဖတ်ပါခင်ဗျ။ စာအုပ်မပေါ်သေးရင် လိုင်းမကောင်းလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခဏတော့ စောင့်ရပါမယ်နော်
By KhitMinnyo on October 07, 2017
Unknown October 7, 2017 at 11:25 AM
Thank, how to download Ebook for iOS.thank bro
Jar Binks April 22, 2021 at 12:13 PM
Skilled computer experts usually perform ethical hacking. They use their programming skills to know the weaknesses in computer systems. While you can find non-ethical hackers abusing the vulnerabilities for personal gain, the ethical hacker evaluates and points them out, then suggests changes to strengthen the system. Computer experts keep systems and information safe with their ethical hacking services. how to hireacomputer hacker